थाहा खबर: अहिलेकाे बजेट पञ्‍चायतकालकाे निरन्तरता मात्र भयाे : सांसद थापा
काठमाडाैं : नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले पञ्चायतकालमा बजेट निर्माण भएजसरी बहुदलीय कालमा भएको र त्यसैको निरन्तरता गणतन्त्रमा पनि रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
बजेट निर्माणमा संसदको, विधायकको विचार र धारणाको विषयमा कहिले पनि छलफल नभएको उनले आरोप लगाए। ‘बजेट निर्माणमा संसदको भुमिका के, विधायकको भूमिका के, हामीले बोक्ने विचारधारको भूमिका के, हाम्रो घोषणा प्रतिको अर्थ र सम्बन्ध के रहन्छ ? हामीले कहिल्यै छलफल ग¥यौं गरेनौं ? हामी पनि ता दौडियौं, कहिलो चुरोटको खोलको चिरकटमा योजना लेखेर मन्त्रीको ढोकामा पुग्यौं, कहिले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर पुग्यौं, प्रधानमन्त्री त पुग्नुभयो, दौडिएर पुग्यौं’, उनले भने, ‘पहिलाको भन्दा स्थिति झन बिग्रियो। ’
सांसद थापाले स्थानीय पूर्वाधार कोषको नामबाट वडाध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थालेदेखि स्थिति बिग्रिएको बताए। कोषलाई यो पटकको बजेटबाट हटाउन सरकारलाई भन्ने आँट गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे।
स्रोत अभावले मात्रै स्वास्थ्य सेवामा आजको अवस्था नआएको उनको भनाइ थियो। गत वर्ष बजेटमा गरिएका बाचा कुनै पनि पुरा नभएको उनले बताए। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा बारे गरिएका बाचा पूरा नभएको तर्फ सांसद थापाले इंगित गरे।